Tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း: August 2009
Australia neglecting needs of IDPs in Eastern Burma
Tuesday, 25 August 2009 16:36 By Sai Awn Tai
Australia is neglecting what the Australian people want and what the right thing to do is for the Internally Displaced Persons (IDPs) in eastern Burma, said Dr John Kaye, NSW Greens MP.
During the last week about 10,000 people from Shan State fled from their homes after the military attacked and burned down the villages.
Burma advocacy campaigners Nang Charm Tong and her colleagues from the Thai-Burma border have urged the Australian government to change its foreign aid policy to assist Shan, Karen and other ethnic IDPs.
[Nang Charm Tong]
Nang Charm Tong
They met Mr Bob McMullan, the parliamentary secretary for international development assistance on 19 August to press AusAid to change its policy.
“Mr McMullan was sympathized and said that he will talk with his government colleagues but the result is unlikely to come overnight.
“This is our first step on this advocacy campaigning. We will continue to lobby until the Australian government changes its cross-border aid policy,” said Charm Tong.
Australian foreign aid has increased from $A16 million to 29 million for Burma but none of this money will assist the IDPs and last year, only $A1.2 million went to refugees who live in refugee camps at the Thai-Burma border.
The Burmese community in Australia, surprised by the AusAid policy, has asked questions why the Australian government does not assist the cross-border people who urgently need assistance for health care and food.
“There appear to be strong links between the Australian government and the military regime,” said Paul Power, the Chief Executive Officer of Refugee Council of Australia.
“I would like to question the nature of cooperation between the Australian government and the government of Burma” he said.
“The Australian government is quite reluctant to provide aid assistance to the IDPs in eastern Burma saying it has to respect the sovereignty of Thailand and Burma. They are also worried about the risk factor on the ground if they provide cross-border assistance to the IDPs.”
“In addition, they want to focus the humanitarian assistance through Rangoon,” said Dr Myint Cho, the director of Australia Burma Campaign.
However, Dr John Kaye believes that AusAid can also fund cross-border programs to IDPs without affecting their programs already being funded in Burma.
“If we look at countries like Canada, Norway, Denmark and US who do give funds to IDPs, they have also continued to operate their programs through Rangoon without problems from the military regime,” he said.
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 9:16 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 9:00 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Thursday, 06 August 2009 17:18 Hseng Khio Fah
A local woman in Mongkeung Township, southern Shan State was beheaded by the Burma Army troops that have been launchingafour-cut campaign since 27 July , according to villagers who recently fled to Thailand.
In the morning of3August, Nang Hsoi, 29, from Wan Kart village, Ho Khai village tract was arrested in her village by soldiers from Mongkeung based Light Infantry Battalion (LIB)#514 after falsely accusing her as the wife ofaShan State Army (SSA) ‘South’ fighter and collaboration with the SSA, saidalocal villager who asked not to be named. nbsp;
“In the evening they [soldiers] took her toabridge nearby the village, cut her head down and threw it into the creek,” he said.
Two days before her death, over 10 villagers from Wan Kart, Wan Kawng and Wan Long village were detained on suspicion of being SSA spies at the army base.
The Burma Army that has been the four-cut campaign (cutting food, funds, intelligence and recruits to the armed resistance by local populace) had ordered villagers in Mongkeung, Kehsi and Laikha townships to leave their homes within5days, from 1 to5August.
Since then, at least 300 houses in the three townships were razed to the ground and more than 300 villagers were forcibly relocated to the town, saidasource.
The campaign drive was led by the Mongnawng – based Military Operations Command (MOC) #2 command: Loilem based IB#9, and #12, Laikha based IB#64 and LIB#515, Namzang based IB#66 , #247 and LIB#516, Mongnai based IB#248 and LIB#518, Panglong based LIB#513, Mongkeung based LIB#514 and Mongpawn based LIB#517.
To date, 21 villages from Panghsang village tract and9villages from Wan Htee village tract in Laikha township alone were forced to resettle in Marklang quarter of the town.
During the drive some were beaten and some were reportedly killed, forcing many others to hide in the jungle, said another villager who is seeking asylum on the Thai-Burma border.
“There were some people who are hiding in the jungle preparing to seek refuge in Thailand,” she said, “Many people will be coming soon.”
Currently, about 10 people are seeking asylum in areas near Thailand.
During the last engagement on 15 July, the Burma Army’s LIB 515 suffered 11 killed, 1 captured and5assorted weapons lost.
During the 1996-98 campaign against the SSA, 1,500 villages were destroyed and more than 300,000 in southern and eastern Shan State were forcibly relocated,athird of which had escaped into Thailand.
Gang-rape follows Four-Cuts
Friday, 07 August 2009 17:37 Hseng Khio Fah
Latest reports of the Burma Army’s four-cut campaign said thataShan woman from Shan State South’s Laikha township was gang raped in front of her husband by the Burma Army that has been wagingafour-cut campaign since late July.
The couple was identified as Sai Awta, 23, and her wife Nang Noom, 20 (not their real names), from the 31 household Wan Nawngpoke village, Tarkmawk village tract, Laikha Township, saidasource.
The incident occurred onlyahalf of mile south of the village on August2at5pm, when three privates led by Sergeant Tin Aye from Mongkeung based Light Infantry Battalion (LIB) #514 was on patrol and found the said couple while they were working in their farm. The group detained them after accusing of being members of the SSA-South.
Some soldiers separated Sai Awta from his wife, tied him witharope toapost of the hut and beaten him while others raped her wife in front of him in turn including the Sergeant until midnight. After that, the couple was warned not to spread news of the rape, said Sai Awta’s friend who declined to be named.
“They [soldiers] threatened them not to tell anybody; otherwise their family and both of them would be killed,” he said.
On that day,a25 strong patrol from the battalion together with 14 men of pro-junta Mongzeun militia group (formally Brigade 758 of the Shan State Army (SSA) ‘South’ that surrendered in July 2006) arrived at the village.
It was led by Lt Myint Than and the militia group was led by Sai Yoong whose leader Mongzeun was killed in an attack by the SSA on 25 May.
“Villagers were givenadeadline to leave their houses, if not all houses would be burnt down,” saidalocal source who wishes to remain in anonymity.
A clash between LIB#515 and SSA fighters on 15 July in Laikha township has led hundreds of villagers in Laikha, Kehsi and Mongkeung townships suffer from several human rights violations.
“License to Rape,”areport by the Shan Women’s Action Network (SWAN), which was published in 2002, detailing 173 incidents of rape and involving 625 women and girls, had shaken the international community.
Teenage girl gang raped
Tuesday, 11 August 2009 16:09 Hseng Khio Fah
A 15 year old girl in southern Shan State’s Kehsi Township, was gang raped byalocal based Burma Army patrol, during she and her 8 year old younger sister were on their way to look for their livestock.
At about 10:00 am on5August, the elder one named Nang Nang, daughter of Long Herng and Pa Hsai (not their real names) hailing from Wan Keng village, Kehsi village tract, was gang raped by some6soldiers from the Kehsi based Infantry Battalion (IB) # 132, while she and her sister Nawng Nawng were looking for their cows.
On that day,a30 strong patrol from IB #132 led by Captain San Aye were patrolling around the areas in search of the rebels, and found the two girls halfamile from the village.
The captain stopped the two girls and ordered them to follow him forawhile after he ordered most of his unit to go ahead, saidalocal villager who wishes not to be named.
“He [Captain] and his men then raped Nang Nang in turns,” she said.
The two were released after their [soldiers]’s desire were fulfilled and reached home in fear and frustration as they were threatened that they both and their family would be killed if they were to disclose the matter to anyone, the source further added.
“Even if you tell others, no one can punish us because all of you are living under the Burma Army’s rule,” she quoted the captain as saying.
However, the youngest one could not bear it any longer and told her family and other villagers about the incident happened to her elder sister, but the family and the village headman did not dare to complain for fear of further punishment by the army, she said.
On2August,a20 year old woman from Shan State South’s Laikha township was also gang raped in front of her husband by the Mongkeung based Light Infantry Battalion (LIB)#514 that has been wagingafour-cut campaign in areas where the Burma Army and the Shan State Army (SSA) ‘South’ fought in the mid July.
After the clash, battalions under the Mongnawng based Military Operation Command (MOC) #2 started wagingafour-cut campaign ((cutting food, funds, intelligence and recruits to the armed resistance by local populace) in Kehsi, Mongkeung and Laikha townships, Shan State South.
Since then, hundreds of villagers from the areas have been suffered several human rights abuses such as sexual violence and killing.
On3August,a29 year old woman in Mongkeung Township, was beheaded by the same LIB#514 after she was falsely accused of beingawife of SSA fighter.
Rights groups to regime: Stop atrocities
Thursday, 13 August 2009 17:30 Hseng Khio Fah
Again, overseas Shan rights groups are on calling the Burmese military immediately stop its atrocities and also on the international and regional communities to end their silence and set up an investation team on the regime’s crimes against humanity.
Since 27 July, Burma Army units under the command of the Mongnawng based Military Operations Command (MOC) #2, Shan State South, have burned down over 500 houses, more than 200 granaries, and forcibly relocated an estimated 10,000 villagers from almost 40 villages in Mongkeung, Laikha and Kehsi townships, according to the rights groups.
“We are therefore demanding the regime immediately stop their atrocities against people the and allow all relocated villagers to return to their homes,” said Nang Charm Tong from Shan Women Action’s Network (SWAN) atapress conference held today on the Thai-Burma border.
“On the other hand, we would like to call on the international communities such as the United Nations Security Council, ASEAN and Burma’s neighbors to pressure Burma to stop its oppression on the people. They should not let Burma continue abusing the people,” she added.
According to her, the current forced relocation campaign is the largest forced relocation since 1996-1998, when over 300,000 villagers were uprooted in southern and central Shan State, most of whom have since fled to Thailand.
“This is another attempt to uproot the ethnic people,” she said.
During the 1996-98 campaign against the SSA, almost 1,500 villages were destroyed and more than 300,000 in southern and eastern Shan State were forcibly relocated,athird of which had escaped into Thailand.
“The troops were ordered by their headquarters to burn down the houses, as they repeatedly radioed to their headquarters as the buildings went up in flames,” said Shan Human Rights Foundation’s Director Kham Harn Fah.
"This campaign has been carried out cold-bloodedly and systematically,” he added.
The Burma Army earlier retaliated the Pa-O National Liberation Organization (PNLO) that had wiped outa12-men patrol on3May by killing two village headmen, torturing more than 80 villagers and gangrapeda15-year old girl in Hsihseng, another southern Shan State township, according to several exile news groups.
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 10:50 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
(၃) အိပ်မက်ကောင်းတွေကိုပဲ မြင်မက်နိုင်ပြီး ယုတ်ညံ့ရွံ့မုန်း ကြောက်လန့်ဖွယ် အိပ်မက်များ
(၅) မမြင်ရတဲ့ နတ်များကလည်း ချစ်ခင်ကြတယ်။
(၆) မိဘက သားသမီးကို စောင့်ရှောက်သလို နတ်များကလည်း မေတ္တာပွားသူကို
(၇) မေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့သူကို မီး၊ အဆိပ်၊ လက်နက်တွေရဲ့ ဘေးရန် မကျရောက်ဘူး။
(၈) မေတ္တာဘာဝနာနှင့်နေလေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ စိတ်တည်ကြည်လွယ်ပြီး
(၉) မျက်နှာ အမြဲပဲ ကြည်ကြည်လင်လင်ရှိတယ်။
(၁၀) အိပ်ပျော်သွားသလိုပဲ မတွေမဝေ မပင်မပန်း သေလွန်ရတယ်။
(၁၁) နိဗ္ဗာန်ကို မရသေးသော်လည်း ယခုလူ့ဘ၀စုတေပြီးနောက် အိပ်ပျော်ရာမှနိုးလာသလိုပဲ
မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးနေတဲ့သူဟာ အသက်ရှင်နေဆဲဘ၀မှာ လူချစ်တယ်၊ နတ်ချစ်တယ်၊ ကြံတိုင်းအောင်ပြီး ဆောင်တိုင်းမြောက်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းက ဘ၀မှာ နေဖို့ရော၊ သေဖို့ကိုပါ အားကိုးနိုင်လောက်တဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ပါတယ်။
မေတ္တာပွားပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟာ ပတ်ဝန်းကျင်လောကတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ မြင်ရမမြင်ရသတ္တ၀ါအားလုံးရဲ့အကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နေသူလည်းဖြစ်တယ်။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ငြိမ်းချမ်းတယ်၊ အေးမြတယ်၊ နတ်များလည်း အချင်းချင်း ချစ်ခင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ သာဓကတွေ အများကြီးရှိတယ်၊ ယုံယုံကြည်ကြည် ကြိုးကြိုးစားစား အားထုတ်ကြပါ။
နိုင်ငံခြားသွားပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ ဘေးရန်ကင်းဖို့၊ အစိုးရဌာနတွေမှာ ကုမ္ပဏီတွေမှာ ရာထူးရဖို့၊ အထက်လူကြီးရဲ့ချစ်ခင်မျက်နှာသာပေးမှုရလာဖို့ဆိုပြီး အဆောင်တွေလက်ဖွဲ့တွေလုပ်ကြတာထက် မိမိရဲ့မေတ္တာဘာဝနာစွမ်းအားကိုသာ တင်းတင်းရင်းရင်း ၀ီရိယစိုက်ပြီး ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြပါ။ ရန်လည်းလုံ၊ လူလည်းချစ်၊ နတ်လည်းချစ်၊ စိတ်အကြံလည်း ပြီးမြောက်အောင်မြင်လို့ ပီယသိဒ္ဓိအောင်နေသူလို့ကို ဘေးက ထင်ရလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီ့ထက်ကောင်းမွန်တဲ့ ယတြာလက်ဖွဲ့မရှိပါဘူး။
တစ်ဖက်သားကို ချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်တွေ၊ ကောင်းစားစေလိုတဲ့စိတ်တွေ၊ ဘေးရန်ကင်းစေလိုတဲ့စိတ်တွေ အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် အဖန်ဖန် ဖြစ်စေတာကို မေတ္တာဘာဝနာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုစိတ်တွေပွားအောင် များအောင် အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် ပြုလုပ်နေတာကိုတော့ မေတ္တာဘာဝနာပွားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ရဲ့အပေါ်ယံပိုင်းကနေ ပွားနေရုံမျှ မဖြစ်စေဘဲ မိမိစိတ်ရဲ့ အတွင်းပိုင်း၊ အနက်ရှိုင်းဆုံးကနေ မေတ္တာပွားရင် မေတ္တာအင်အား စူးရှထက်မြက်လာမှာဖြစ်တယ်၊ နှုတ်ကနေ သာမာန်ရွတ်ဆိုရုံမျှနဲ့ မေတ္တာဘာဝနာ ပွားတယ် မမည်သေးပါဘူး။
ပါဠိ ဝေါဟာရအနေနဲ့ ပွားများမယ်ဆိုရင်တော့..
သုခီအတ္တာနံ ပရိဟရန္တုလို့ အကြိမ် ရာထောင်မက နှလုံးသွင်း ပွားများနေရပါမယ်။
မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပွားမည့်သူဟာ မေတ္တာရဲ့အင်အား မေတ္တာရဲ့စွမ်းအင်ကို သံသယမရှိ ယုံကြည့်ဖို့က အရင်းခံ ပဓာနကျပါတယ်။ မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်း ရှုပွားရာမှာ ဝေါဟာရစကားလုံးရဲ့အနက် ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုကလည်း အရေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အတိုဆုံးနှင့် အနက်ထိမိပြီး အဓိပ္ပာယ်လည်း ကျယ်ပြန့်တဲ့ မြန်မာဝေါဟာရကတော့ “ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ”လို့ပဲ သုံးနှုန်းပြီး မေတ္တာဘာဝနာ ပွားနိုင်ပါတယ်။
၁။ မေတ္တာရဲ့အင်အားစွမ်းအင်ကို ယုံကြည်ဖို့ ကြိုတင်လေ့လာဆည်းပူးထားရမယ့်အပြင်
၂။ မေတ္တာခံယူမယ့် သက်တော်ထင်ရှားပြီး မိမိအပေါ် အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်၊
ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ် (၅)ဦးခန့်ကို ဦးစွာရွေးချယ်ထားပြီး ဖြစ်ရပါမယ်။
၃။ မေတ္တာကို အရပ်မျက်နှာများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ပို့လွှတ်တဲ့အခါမှာ မိမိပို့လွှတ်ရာကို
မေတ္တာလှိုင်းများ ရောက်နိုင်တယ်လို့လည်း ကြိုတင်သိထားရမယ်။
နောက်ပိုင်း မေတ္တာဘာဝနာပွားတာ အလေ့အကျင့်အားကောင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့ မေတ္တာလှိုင်းတွေ မိမိခန္ဓာကိုယ်က ဖြာထွက်ပြီး ပို့တဲ့ဆီကို ရောက်တယ်လို့ ကိုယ်တိုင် သဘောကျနိုင်ပါတယ်။
၄။ ဒါပေမယ့် မေတ္တာပွားတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရလိုမှု လုံးလုံးကို မပါသင့်ပါဘူး။
မေတ္တာခံယူသူအတွက် ချမ်းသာစေလိုတဲ့စိတ်၊ ကောင်းစားစေလိုတဲ့စိတ်သာ ရှိနေရပါမယ်။
၅။ “သြဓိသမေတ္တာ” ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းပြီး ပို့တဲ့အခါမှာတော့ မေတ္တာခံယူမည့်ပုဂ္ဂိုလ် မိမိရှေ့မှာ
မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေတယ်လို့ကို စိတ်ညွတ်ပြီး အဲဒီပုဂ္ဂိုလ် မျက်နှာသဏ္ဍာန်ကို စိတ်ထဲ ပုံဖော်မြင်အောင်ကြည့်ပြီး ရာထောင်မက မေတ္တာပွားရပါတယ်။
၆။ မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းမပွားခင် ဦးစွာ ဘုရားရှိခိုးတာ သီလခံယူဆောက်တည်တာ စတဲ့ ပုဗ္ဗကိစ္စ
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုတော့ ဆောင်ရွက်မြဲအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
၇။ အစပိုင်း လေ့ကျင့်ခါစမှာတော့ တစ်ကြိမ်ကို မိနစ်၃၀စီ သတ်မှတ်ပြီး အကြိမ်များများကို
ထိုင်တဲ့ ဣရိယာပုထ်နှင့်သာ ပွားသင့်ပါတယ်။ နေရာကျပြီဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်း သိပ်ကို လွယ်ကူပါတယ်။ မေတ္တာပွားပြီးနေရတာ သက်သာတယ်၊ ပေါ့ပါးတယ်၊ ငြိမ်းချမ်းတယ်၊ ဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိလာတဲ့ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကို မပွားဘဲ မနေနိုင်တော့ပါဘူး။ အလိုလိုပဲ စိတ်က မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်း ပွားပြီးသားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
၈။ လျောင်း၊ ထိုင်၊ ရပ်၊ သွားဆိုတဲ့ ဣရိယာပုထ် ၄မျိုးထဲမှ အလျဉ်းသင့်သလို တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ပို့နိုင် ပွားနိုင်ပါတယ်။ လေးလေးနက်နက်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်သာ ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုထ်ကို ညွှန်ပြတာပါ။ (တိဌံစရံနိ သိန္နောဝ သယာနော- မေတ္တာသုတ်)
၉။ သေပြီးသူကို အာရုံပြုပြီး မေတ္တာမပွားရဘူး။ သေပြီးသူဟာ မေတ္တာအာရုံယူဖို့
မဖြစ်နိုင်တော့တာမို့ သေပြီးသူကို အာရုံပြုပြီး မေတ္တာမပွားရပါဘူး။
၁၀။ ရှေးဦးစွာ မေတ္တာအာရုံနိမိတ်ယူပြီး မပွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၎မျိုးကတော့
(၄) ရန်သူတို့ ဖြစ်တယ်။
အကြောင်းမှာ- မုန်းနေတဲ့သူ၊ ရန်သူတွေကို ချမ်းသာကောင်းစားစေလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ ခက်တဲ့အပြင် ဦးစွာ မေတ္တာပို့မိရင် မေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ဒေါသ၊ အာဃာတတို့သာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီသူ၂ဦးကို ဦးစွာ မေတ္တာမပွားရပါဘူး။
အလွန်ချစ်ခင်တဲ့သူ အပေါ်မှာလည်း တဏှာပေမစိတ် ရင့်သန်ကြီးထွားနေလို့ မေတ္တာစိတ် မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး။
အလယ်အလတ် မချစ်မမုန်းသူရဲ့အကျိုးစီးပွားကို လိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ဖို့လည်း ခက်ခဲပြန်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကို ဦးစွာ မေတ္တာမပွားရပါဘူး။ မေတ္တာစိတ်အစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲ သူတို့ကို မေတ္တာပွားရပါမယ်။
၁၁။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်(ယောက်ျားက မိန်းမကို၊ မိန်းမက ယောက်ျားကို) မေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်လည်း မေတ္တာစိတ်မဖြစ်ဘဲ ရာဂစိတ်ရိုင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် သတိပြုရပါမယ်။ သို့သော် အမျိုးသမီးများအနေနှင့် သက်တော်ထင်ရှား ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးများကို မေတ္တာအာရုံထားပြီး ဘာဝနာပွားတဲ့အခါ မူမမှန်တဲ့စိတ်ရိုင်းများ မဖြစ်လာရင်တော့ မေတ္တာပွားနိုင်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုပဲ မေတ္တာစတင်ပွားပို့ရပါမယ်၊ “ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ”လို့ အကြိမ် ရာထောင်မက မိမိကိုယ်ကို ဦးစွာ မေတ္တာပွားပါ။ မိမိကိုယ်ကို မေတ္တာပွားရတာ အားရကျေနပ်ထားရင် သူတစ်ပါးကို မေတ္တာပွားရတာ လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အရပ်များကို စိတ်ဖြင့် လှည့်လည်ရှာသော်လည်း မိမိကိုယ်ထက်သာပြီး ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူကို မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ ဘုရားရှင် မိန့်တော်မူထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို သက်သေပြုပြီး မေတ္တာပို့တာဟာ မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းမှာ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးမှ သက်တော်ထင်ရှားရှိပြီး မေတ္တာစတင်မပွားရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်က လွတ်ကင်းပြီး မိမိအပေါ် ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ ဆရာသမား မိဘဘိုးဘွားတွေထဲက (၅)ဦးခန့်ကို ကြိုတင်ရွေးချယ်ထားရမယ်။ မိမိကိုယ်ကို မေတ္တာပို့ပြီးနောက် ရွေးချယ်ထားတဲ့ မေတ္တာခံယူမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကို မိမိအနား မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေသလို စိတ်ဝယ်မှတ်ပြီး “ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ၊ ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းပါစေ”လို့ အကြိမ်ကြိမ် မေတ္တာပွားရပါမယ်။
မေတ္တာခံယူမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါ် ကျေနပ်ပြီးမှ နောက်တစ်ဦးကို ပြောင်းရမယ်၊ အကယ်၍ မေတ္တာပွားရတာ အခက်အခဲရှိလာရင်တော့ မိမိကိုယ်ကိုပဲ မေတ္တာပြန်ပွားပါ၊ ပြီးမှ မေတ္တာခံယူမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ပြောင်းယူပါ။
တခါတရံ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကို မေတ္တာပွားရတာ လွယ်ကူပြီး မျက်နှာပုံပန်းသဏ္ဍာန် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် မြင်လာတတ်သော်လည်း အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကျတော့ အခက်အခဲရှိနေတာလည်း ကြုံရတတ်တယ်။ အဲဒီအခါကျရင် လွယ်ကူတဲ့ မေတ္တာအာရုံခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဦးစားပေး ပွားရပါမယ်။
မေတ္တာစိတ် ညီညွှတ်မျှတနေပြီဆိုရင်တော့ ရန်သူ၊ မုန်းတဲ့သူ၊ အလွန်ချစ်တဲ့သူတွေကိုလည်း ပွားနိုင်ပါပြီ။
မိမိစိတ်ကို မိမိကြည်ညိုဖူးမလားတော့မသိဘူး။ မေတ္တာခံယူမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို စူးစိုက်ပြီးတော့ ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ၊ ကျန်းမာပါစေလို့ ကြိမ်ဖန်များစွာ မေတ္တာပို့နေရင် မိမိစိတ်ထဲမှာ တခြားအာရုံတွေ၊ တခြားစိတ်ကူးတွေ ဘာမှပေါ်မလာတော့ဘူး၊ အဲဒီမေတ္တာခံပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာသာ စိတ်က စုပြုံစူးစိုက် နစ်နေတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ လိုချင်တပ်မက်တဲ့စိတ်၊ စိတ်ပျက်စိတ်ဆိုး စိတ်အလိုမကျတဲ့စိတ်၊ အိပ်ချင်ငိုက်မြည်း ပျင်းရိတဲ့စိတ်၊ စိတ်ပူပန်ပျံ့လွင့်တဲ့စိတ်၊ ကြောင့်ကြတဲ့စိတ်နှင့် ရတနာသုံးပါးအပေါ် သို့လောသို့လော မပြတ်သားတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ တားဆီးပိတ်ပင်တတ်တဲ့ နိဝရဏတရားငါးပါး ကင်းကွားနေတတ်တယ်။ မေတ္တာအင်အား ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် လေ့ကျင့်လာရင် မေတ္တာခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ မိမိဟာ ပြုံးရွှင်ကြည်လင်တဲ့သွင်ပြင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေသလိုပဲ စက္ကန့်ပိုင်း မိနစ်ပိုင်းကြာတဲ့ထိ အသိစိတ်ထဲ စွဲမြဲသက်ဝင် တည်နေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တခြား ဘာအာရုံခံမှ မရှိဘဲ မေတ္တာခံယူမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ပကတိ ကျန်းမာစေလိုတဲ့စိတ် ပျော်ရွှင်ချမ်းသာ ပြည့်စုံစေလိုတဲ့စိတ်တွေ အလိုလိုဖြစ်နေတာဟာ တမင်တကာစိတ်ကူးကြံဆပြီး ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်အဆင့်မျိုး မဟုတ်တော့ဘူး။
၀ီရိယသန်သန် တိုး၍ ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပွားများတဲ့ ယောဂီများဟာ မိနစ်ပိုင်းမှ နာရီပိုင်းထိ ကြည်လင်ချမ်းမြေ့တဲ့ မေတ္တာစိတ်နဲ့ နေနိုင်လာပါတယ်။ အိပ်ငိုက်တာမဟုတ်ဘူး၊ စိတ်က ကြည်လင်သန့်စင်နေတယ်။
မိမိရည်မှန်းထားတဲ့ အချိန်နာရီးကာလတလျှောက်လုံး ဘာစိတ်မှမရှိဘူး၊ မေတ္တာစိတ်မျှပဲ ရှိတော့တယ်။
မေတ္တာစိတ်မျှပဲ ရှိနေတာ အချိန်ကြာလာရင်တော့ တခါတရံ ငါ့မှာ ဘာစိတ်တွေ ဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့လည်း တစ်ချက်တစ်ချက် စစ်ဆေးမိရက်သားဖြစ်နေတယ်။ ဒီလို (၀ိတက်)၀င်လာခိုက်တော့ မေတ္တာစိတ်အစဉ် ခဏပျက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ပြန်ပြီး ထူထောင်ရတာ ဘာမှ မပင်ပန်းဘူး၊ ကြောင့်ကြစိုက်ရတယ်လို့တောင် ပြောလို့မရဘူး။
အဲဒီလို အချိန်တွေ တော်တော်ကြာသွားပြီး မေတ္တာစိတ်မှအပ ကျန်တဲ့စိတ်တွေ မဖြစ်တောကို သိရလို့လည်း ယောဂီသဘောကျမိတတ်တယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ မိမိစိတ်ကိုမိမိ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြည်ညိုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကို ယောဂီကိုယ်တိုင် သဘောကျနိုင်ပါပြီ။
လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ကျေပွန်အောင် မေတ္တာပွားပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဦးစွာ
မိမိထိုင်နေတဲ့ အခန်းရဲ့ မျက်နှာအားလုံးကို မေတ္တာပွားရပါမယ်။
- မိမိထိုင်ရာမှ အရှေ့ကနေပြီး မေတ္တာ စ,ပွားတာ လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါကို အထပ်ထပ်ပွားလို့ ကျေပွန်ရင်
- အိမ်ဝန်းရဲ့အရပ်မျက်နှာအားလုံးကို မေတ္တာပွားရပါမယ်။
- ပြီးရင် ရပ်ကွက်ကျေးရွာနယ်နိမိတ်ထိ မေတ္တာပွားရပါမယ်။
- အဲဒီနောက် မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်းနယ်၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံနယ်နိမိတ်အထိ အရပ်မျက်နှာအားလုံးကို မေတ္တာပွားရပါမယ်။
- ဆက်ပြီးတော့ ကမ္ဘာကနေ အနန္တစကြ၀ဠာထိအောင် စိတ်ကို မြှင့်မြှင့်ပြီးတော့ ချဲ့ချဲ့ပြီးတော့ အရပ်မျက်နှာအားလုံးကို မေတ္တာပွားရမယ်။
- အလေ့အကျင့်ရလာတဲ့အခါမှာတော့ အရပ်မျက်နှာဘောင်တွေ မရှိတော့ဘဲ စက်ဝန်းကြီးအတိုင်း မေတ္တာလှိုင်းများ ချဲ့ချဲ့ပြီး သွားနေတယ်လို့ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
- အဲဒီအ၀န်းက ရံခါ လင်းနေတယ်၊ ရံခါ ဖွေးနေတယ်လို့လည်း ထင်ရတတ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကနေ မေတ္တာလှိုင်းများ ပို့တဲ့ဆီကို အမှန်တကယ် ရောက်နေပြီလို့လည်း ခံစားရတတ်ပါတယ်။
- အထူးသတိပြုဖို့လိုတာကတော့ မိမိရဲ့မေတ္တာကြောင့် ရန်သူငုပ်လျှိုးပြိုလဲစေရမယ်၊ ရန်သူ ဒုက္ခရောက်ရမယ်၊ ငါ့မေတ္တာစူးရင် သင်ရူးပြီလို့ မတွေးမကြံရဘူး၊ မရည်ရွယ်ရဘူး၊ ဒီလိုစိတ်သဘောထားနှင့် မေတ္တာပို့ရင်တော့ မေတ္တာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး၊ ဆန့်ကျင်ဘက် ဒေါသအာဃာတ ရန်ငြိုးတွေသာ ဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်။ ပို့တဲ့သူဆီကို မေတ္တာရောက်မှာ မဟုတ်တော့တဲ့ပြင် မိမိမှာပဲ ပူလောင်ပင်ပန်းစေတဲ့ အကုသိုလ် ကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်ပြီး ပင်ပန်းဖွယ်ပဲရှိပါတယ်။ မေတ္တာရဲ့ငြိမ်းအေးချမ်းသာမှုနဲ့တော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။
နေ့စဉ်ဘ၀ထဲ၌ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း ပွားများခြင်း
မေတ္တာဘာဝနာပွားတာ ဦးစွာ မနော(စိတ်)ကနေ ပွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလေ့အကျင့်ရလာတဲ့အခါကျတော့ နေ့စဉ်ဘ၀ထဲကို မေတ္တာရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒီလိုရောက်လာဖို့ အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းကတော့ လူတစ်ယောက်ကို တွေ့ရင် မိမိက ဦးစွာ မေတ္တာပို့ပါ။ တစ်နေရာရာသွားရင် မေတ္တာပို့ပြီးမှ သွားတဲ့ အလေ့အကျင့်လုပ်ပါ။ အိပ်ရာဝင်ရင်လည်း အိပ်မပျော်မချင်း မေတ္တာပို့နေပါ။ မေတ္တာပို့ရင်းပဲ အိပ်ပျော်ပါစေ၊ နိုးလာရင်းလည်း မေတ္တာစိတ်နှင့်ပဲ နိုးနိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးပါ။ စားသောက်တဲ့အခါလည်း ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်သူများကို မေတ္တာပွားပြီးမှစားပါ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို သတိရရင်လည်း မေတ္တာအရင်ပွားပါအုံး။
ဒီလိုနဲ့ အလေ့အကျင့် အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ မိမိတမင်တကာ မေတ္တာစိတ်ဖြစ်အောင် လုပ်စရာမလိုဘဲ အလိုလိုပဲ မေတ္တာစိတ်ဖြစ်နေတာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ထဲ သူ့အလိုလိုပဲ ကျေးဇူးတင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သူကို တွေ့ရင်လည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သနားကရုဏာစိတ်တွေ ရင်ထဲ အလိုလိုပဲ ဖြစ်လာတတ်တယ်။
မေတ္တာရဲ့ ကျေးဇူးနှင့် သာဓကကို ဖော်ပြရင်တော့ အများကြီးပါပဲ..။
မြတ်စွာဘုရားရှင်က လက်တစ်ဖျစ်တီးကာလမျှ မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများဖြန့်ဖြူးပို့သ မှီဝဲနေတဲ့ ရဟန်းကို ဈာန်မှ မဆိတ်သုဉ်းသောရဟန်း၊ ပြည်သူ့ဆွမ်းကို အကျိုးရှိအောင် ဘုဉ်းပေးသုံးဆောင်သောရဟန်းဆိုပြီး အထူးချီးမွမ်းတော်မူပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့သာဓကအနေနှင့်တော့ ဓမ္မစင်္ကြာဒေသနာဦးကို မဟောကြားခင် ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးပါးနှင့် ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်ဟာ အံ့ဖွယ်မှတ်သားစရာပါပဲ။
“မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ထိုပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးတို့၏ စိတ်ထားကို သိမြင်တော်မူလေလျှင် အလုံးစုံသော သတ္တ၀ါတို့အပေါ်၌ မည်သည့်သတ္တ၀ါအတွက်ဟု ရည်မှတ်ပိုင်းခြားမှု မထားသောအားဖြင့် သိမ်းကျုံးဖြန့်လွှမ်းထားနိုင်သော မေတ္တာစိတ်ဓာတ်တော်ကို အကျဉ်းချုံး ရုံးစု၍ သီးသန့်ပိုင်းခြား သတ်မှတ်သောအားဖြင့် ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးတို့အပေါ်၌သာလျှင် မေတ္တာဖြန့်ပို့တော်မူ၏။ ဘုရားရှင်မေတ္တာဓာတ် ထိခိုက်ခြင်းကြောင့် ထိုပဉ္စ၀ဂ္ဂီတို့သည် ဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူလျှင် (သိဒ္ဓတ္ထလာလျှင် ခရီးဦးအကြိုမပြုတော့ဘူးဟူသော)မိမိတို့ မူလကတိအတိုင်း မရပ်တည်နိုင်ကြတော့ဘဲ ရှိခိုးခြင်း၊ ခရီးဦးကြိုဆိုခြင်းစသော အမှုကိစ္စအားလုံးကို ပြုမိကြလေပြီ” ဒါက မေတ္တာရဲ့သာဓကပါပဲ။
နောက်သာဓကတစ်ခုကလည်း မြတ်စွာဘုရားဟာ စင်္ကြာဝဠာအနန္တတို့အပေါ်၌ ဖြန့်လွှမ်းပို့နိုင်တဲ့ မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကို နာဠာဂီရိဆင်တစ်ကောင်တည်းအပေါ်မှာသာ စုပြုံဖြန့်လွှမ်းတော်မူပါတယ်။ နာဠာဂီရိဆင်ဟာ ဘုရားရှင်၏မေတ္တာစိတ်ကို ထိခိုက်နေပြီဖြစ်လို့ ဘေးရန်ကင်းစွာ ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်အစုံမှာ ခိုလှုံတုပ်ဝပ်ပါတော့တယ်။
မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်မည့်သူ သတိထားရမည့် အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့.. မေတ္တာစွမ်းအားဟာ ရှေးအခါကသာ စွမ်းတယ်၊ ယခု မစွမ်းတော့ဘူးလို့ မမှတ်ယူရဘူး၊ တရားတို့မည်သည် ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါ၊ အချိန်ကာလ၊ နေရပ်ဒေသဟူ၍ မရှိကောင်းပါဘူး။ အရင်လည်း စွမ်းတယ်၊ ခုလည်း စွမ်းတယ်၊ နောင်လည်း စွမ်းပါတယ်။ ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ တရားတော်မှန်သမျှဟာ.. တကယ်ကျင့်ကြံရင် တကယ့်ကိုပဲ အစွမ်းထက်လှပါတယ်။ ကျင့်ကြံအားထုတ်နေသူတွေ ရှိသရွေ့လည်း သာသနာဟာ မကွယ်ပျောက်ပါဘူး။ ဒါကို သေသေချာချာသိပြီး လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်ထားမှ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဖြစ်မှာပါ။ နောက်ပြီး မေတ္တာပွားများတဲ့ကံဟာလည်း ဘ၀သံသရာမှာ အလွန်ကြီးကိုပဲ အကျိုးပေးသန်လှပါတယ်ဆိုတာကို အထက်မှာ ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီနော်..။
အရှင်ခေမာနန္ဒ(မဟာမြိုင်တောရ) မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းလက်တွေ့ရှုပွားနည်းစာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ဤစာကို ဖတ်ရှုရသောသူအပေါင်း မေတ္တာ၏အေးချမ်းမှုများဖြင့် ပြည့်စုံကြပါစေ…
ဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့် နိမ့်သောကံမြင့်၊ ပိတ်သောဉာဏ်ပွင့်၍ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသည့်တိုင်အောင် အကြောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ရပါစေ။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 4:44 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
စစ်အစိုးရတပ် သျှမ်းရွာသုံးရွာ အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျော် မီးရှို့/ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်
ကြာသပတေးနေ့၊ 30 ဇူလိုင်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
သျှမ်းသူပုန်များအား သတင်းပေးကူညီသည်ဟု စစ်အစိုးရတပ်စွပ်စွဲသည့် သျှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်းမှ သျှမ်းရွာသုံးရွာ အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျော် ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်သဖြင့် ကျေးလက်လူထု ငိုယိုပူဆွေးကြရကြောင်း သျှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်း သတင်း ရပ်ကွက် က ဆိုသည်။
ဂျူလိုင် ၂၉ ရက် မနက် ၀၄း၀၀ နာရီက လဲချားအခြေစိုက် ခလရ ၆၄ မှ စစ်ကြောင်းတကြောင်းသည်လဲချားမြို့အရှေ့ မြောက်ဘက် တတ်မောက်ကျေးရွာအုပ်စုဝင် တတ်မောက်၊ ကွန်ဟုန်း၊ နှင့် ဟိုလုံး(မ်း)ရွာအတွင်းသေနတ်ပစ်ဖေါက်ဝင် ရောက်ပြီး အိမ်ခြေများ စပါးကျီများအားလုံး မီးရှို့ဖျက်ဆီးကာ ဒေသခံအမျိုးသား ၄၀ - ၅၀ ဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီး ရိုက်နှက်စစ်ဆေးကြောင်း ဆိုပါသည်။
“တတ်မောက်ကျေးရွာသူကြီး စိုင်းတိ ၊ ရွာသား လုံးလိန် နဲ့ စိုင်းတာ့ကို မေ့မျောတဲ့အထိ ဗမာတပ်က ရိုက်နှက်တယ်။ ထော် လာဂျီနှစ်စီးနဲ့ လူအယောက် ၅၀ လောက်ကိုဖမ်းသွားတယ်။ ခလရ ၆၄ တပ်ထဲခေါ်သွားပြီး ရိုက်နှက်စစ်ဆေးတယ်။ SSA ခွဲထွက် ဗိုလ်မိုင်းဇင့် လူတွေပါသွားတယ်လို့ ဒီနေ့မနက် တချို့ပြန်လွတ်လာတယ်ပြောတာဘဲ” - ဟု လဲချားမြို့သို့ ထွက်ပြေးရသည့် ရွာသားတဦးက ပြောပါသည်။
အဆိုပါအကြောင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ပြောခွင့်ရ စိုင်းဆိုင်မိဏ်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ဟုတ်မှန် ကြောင်း အတည်ြုပပြောဆိုသည့်အပြင် - “စစ်အစိုးရက လူထုကို နှိပ်စက်ချင်တိုင်း၊ ကျေးရွာရွှေ့ပြောင်းစေချင် တိုင်း သျှမ်းသူ ပုန်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်သတင်းပေး ကူညီထောက်ပံ့တယ်လို့ အမြဲစွပ်စွဲတာဘဲ” - ဟုဆို၏။
အမည်မဖေါ်လိုသည့်ဒေသခံတဦးကလည်း -“အိမ်အသစ်ဆောက်ဖို့ သစ်တွေစုထားတာလဲ ဗမာတပ်မီးရှို့တဲ့အထဲပါသွား ပြီ၊ ၀ယ်ထားတဲ့ကုန်တွေလဲဘာမှမကျန်တော့ဘူး၊ ထော်လာဂျီနဲ့ မြို့ထဲကနေကျန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေသွားသယ်ယူဖို့ကလဲ ဗမာတပ်တွေက အရမ်းစစ်ဆေးနေတယ်၊ ဒီနေ့(၃၀၊၀၇၊၀၉) လဲ တခြားရွာတွေဆက်ရှို့တုန်းဘဲ” - ဟု ပြော၏။
“ဒေသခံလူထုတွေကို နှိပ်စက်တဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဘယ်စစ်ကြောင်းမဆိုကျနော်တို့ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်က ပြန်လည် ချေပမှာ ဘဲ၊ လက်နက်ကိုင်ပြီး ပြည်သူပိုင် ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို အနိုင်ကျင့် ဖျက်ဆီးရင် ကျနော်တို့လဲလက်နက်နဲ့ ပြန်ပြီးတုန့်ပြန်ရ လိမ့်မယ်” - ဟု စိုင်းဆိုင်မိဏ်းက ပြောပါသည်။
စစ်အစိုးရတပ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးသည့် တတ်မောက်ရွာတွင် အိမ်ခြေ ၆၀ ခန့်၊ ဟိုလုံး(မ်း)ရွာတွင်အိမ်ခြေ ၃၀ ကျော်၊ ကွန်ဟုန်းရွာ ၌ အိမ်ခြေ ၄၀ ၀န်းကျင်ခန့် မီးထဲအားလုံး ပါသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများပြောကြားချက်အရ သိရပါသည်။ ၎င်း ရွာများ အား လိုက်လံမီးရှို့နေသည့် စစ်အစိုးရတပ်သည် အများအားဖြင့် လဲချားအခြေစိုက် ခလရ ၆၄ ဖြစ်သည်ဟုပြောသော်လည်း အချို့က လင်းခေး အခြေစိုက် ခလရ ၉၉ ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုကြပါသည်။
၂၀၀၉ ဂျူလိုင် ၁၅ ရက်က သျှမ်းပြည်တပ်မတော် နအဖ စစ်ကြောင်းအားြုခံခိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ စစ်အစိုးရဘက် ၁၁ ယောက် သေဆုံးပြီး ၁၄ ယောက်ဒဏ်ရာရရာမှ တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရန် မိုင်းနောင်အခြေစိုက် ဒကစမှူးဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဇံမြင့် က ၎င်း လက်အောက်ခံ ခမရ၊ ခလရ တပ်မှူးများအားလုံးခေါ်ယူပြီး ဂျူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့က အရေးပေါ်အစည်း အဝေးခေါ်ယူ ကျင်းခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးမှာ တောင်ပိုင်း SSA တပ်ဖွဲ့အား အပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ရန် စစ်ဗျူဟာနှစ်ခု ပြင်ဆင်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း ကျေးရွာမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ပထမဆုံး စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 7:39 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ကျေးလက်သျှမ်းရွာ ၁၀ ရွာကျော်အား စစ်အစိုးရတပ် မီးရှို့ဖျက်ဆီး အဓမ္မမောင်းထုတ်
စနေနေ့၊ 01 သြဂုတ်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
သျှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်း၌ လှုပ်ရှားသော စစ်အစိုးရတပ်များ ကျေးလက်လူထု၏ရပ်ရွာ၊ နေအိမ်၊ စပါးကျီများ ဆက်တိုက် မီးရှို့ဖျက်ဆီးကာ ဒေသခံသျှမ်းလူထုအား ရပ်ရွာမှမောင်းထုတ်၊ ဖမ်းဆီးရိုက်နက်ကြောင်း သျှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်း သတင်းရပ် ကွက်ကဆိုပါသည်။
“နမ့်ဇန်၊ လွယ်လင်၊ ပင်လုံ၊ လဲချား မိုင်းကိုင်၊ ကျေးသီး၊ မိုင်းနောင်အကြား တောရွာတွေဘက်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ လွယ်လင် အခြေစိုက် ခလရ ၉ ၊ ခလရ ၁၂ ၊ လဲချားအခြေစိုက် ခလရ ၆၄၊ ခမရ ၅၁၅ ၊ မိုးနဲအခြေစိုက် ခလရ ၂၄၈ တွေပေါ့။ အဲဒီတပ် တွေဘဲ ၂၇/၀၇/၀၉ စပြီး ရွာတွေကိုလိုက်ပြီးမီးရှို့နေတာ” - ဟု အမည်မဖေါ်လိုသည့် ပင်လုံမြို့သားတဦးက ဆိုသည်။
ခမရ ၅၁၅ က မိုင်းယိုင်းကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာသုံးရွာအား အဓမ္မမောင်းထုတ်မှုကြောင့် လဲချားမြို့နယ် ပန်ဖုန်းကျေးရွာ ဘက်သို့ အိမ်ခြေ ၂၀ ကျော်ထွက်ပြေးကြကြောင်း၊ ခလရ ၆၄ က အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ယောက်ျားလေး အပါအ၀င် ဇီးဇေါ့ရွာသား ၁၄-၁၅ ယောက်ကို မေ့မျောသည်အထိ ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ပြီး အဓမ္မရပ်ရွာပြောင်းခိုင်းကြောင်း၊ ခလရ ၂၄၈ က ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် နောင်တောဝ်းမိုင်းလုံး လားဟူရွာသား ၃၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး ယခုတိုင် ပြန်လွတ်ပေး ခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ ထို့အတူ ခလရ ၉ လွယ်လင် ကလည်း ဟိုခိုင်းရွာသူ/သားများအား အဓမ္မပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြောင်း စစ်အစိုးရလှုပ်ရှားမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဆိုသည်။
အမည်မဖေါ်လိုသည့် အသက် ၃၀ ကျော် လဲချားမြို့သူတဦးက -“၂၉ ရက်နေ့မနက် လဲချားအရှေ့မြောက်ဘက် ၀မ့်တတ် မောက်၊ ကွန်ဟုန်း၊ ဟိုလုံး(မ်း) ရွာတွေကို မီးရှို့တာက ခလရ ၉၉ မဟုတ်ဘူး လွယ်လင်အခြေစိုက် ခလရ ၁၂ ဖြစ်တယ်။ ရွာသုံးရွာ အိမ်ခြေစုစုပေါင်း ၂၀၀ ကျော် မီးထဲအားလုံးပါသွားတယ်။ ဘာမှမကျန်အောင်ရှို့တယ်ဆိုတော့ စပါးကျီ အိမ်မွေး ကြက်ခြံ/၀က်ခြံလဲအလွတ်မထားဘူး၊ ကျွဲ နွား တွေလဲ သတ်စားတဲ့အပြင် တွေ့သမျှပစ္စည်းတွေ လဲယူသေးတယ်” - ဟုဆို၏။
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် တပ်မှူးတဦးက စစ်အစိုးရတပ်လုပ်ရပ်သည် ကုလားမနိုင်ရခိုင်မဲ ဆိုသည့်စကားအတိုင်း သျှမ်းပြည် တပ်မတော်ကို မတိုက်ဝံ့ဘဲ ကျေးလက်လူထုကိုပစ်မှတ်ထား အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ခြင်းသည် ယုတ်ညံ့သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ် ကြောင်း၊ အမှတ် ၂ စကခ မှူး ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဇံမြင့် ပြောသည့် “စစ်ဗျူဟာ ၂ ခု အသုံးပြုပြီး သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ကို အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမယ်” ဆိုသည့်ကြွားလုံးသည် ကျေးလက်လူထု၏ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းသာဖြစ် ကြောင်း၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ကလည်း ပြည်သူ့ကိုယ်စား ဆက်လက်လက်စားချေ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ထပ် ပြော၏။
သျှမ်းပြည်မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးက - ယခုအချိန်သည် သျှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ စုစည်း၍ နယ်ချဲ့ စစ်အစိုးရ/စစ်အာဏာရှင်အား တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန် အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ တော်လှန်ရေးတပ်များအနေဖြင့် ထိရောက်သည့်အောင်ပွဲခံ တိုက်ပွဲမျိုးမဆင်နွှဲနိုင်သရွှေ့ စစ်အစိုးရကလူထုအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးဆက်လက် ချိုးဖေါက်နေ မည် မလွဲကြောင်း - ပြောဆိုသုံးသပ်ပါသည်။
စစ်အစိုးရနှိပ်စက်ညှင်းပမ်းမှုဒဏ်မှထွက်ပြေးနေသည့် သျှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်းဒုက္ခသည်အများအပြားသည် မည်သူ့ထံမှ ကူညီစောင့်ရှောက် ထောက့်ပံ့မမှုမရ။ ဆွေမျိုးမဲ့သူများ တောတောင်ထဲ ပုန်းခိုနေထိုင်ရခြင်း၊ အချို့လည်း မြို့တွင်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၌ခိုကိုးနေထိုင်ရခြင်း၊ ကျေးရွာမီးရှို့ဖျက်ဆီးအဓမ္မပြောင်းရွေ့သည့် စစ်အစိုးရဘက်မှ တစုံတရာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှု မရှိခြင်းတို့သည်သာမက ဒုက္ခသည်ရွာသားများ၏ ပစ္စည်းများလည်း အဓမ္မလုယူနေသေး ကြောင်း ဆိုသည်။
၂၀၀၉ မေ ၂၁ မှ စ၍ှဗ တောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့နှင့် နအဖ စစ်တပ်အကြား တိုက်ပွဲကြီးငယ် အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စစ်အစိုး ရတပ်ဘက်က (ဗိုလ်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူးအဆင့်အထိပါဝင်)၂၀ ကျော်သေဆုံးကာ၊ SSA က လက်နက်ကြီးငယ် ၃၀ ကျော် သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း၊ SSA ဘက်မှ ( ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာ မှ ၂၀၀၉ ဂျွန် အထိ SSA ၏ ခြောက်လပတ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း အရ) တပ်မတော်သား ၂ ယောက်ကျဆုံးပြီး လက်နက် ၁ လက် ဆုံးရှုံးကြောင်း ဆိုပါသည်။
အဆိုပါ တိုက်ပွဲများမှ စစ်အစိုးရဆုံးရှုံးမှုများသောကြောင့် မိုင်းနောင်အခြေစိုက် ဒကစမှူးဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဇံမြင့် က ၎င်း လက်အောက်ခံ ခမရ၊ ခလရ တပ်မှူးများအားလုံး ခေါ်ယူပြီး ဂျူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့က အရေးပေါ်အစည်း အဝေးခေါ်ယူ ကျင်းခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးမှာ တောင်ပိုင်ှးှဗ တပ်ဖွဲ့အား အပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရန် စစ်ဗျူဟာနှစ်ခု ပြင်ဆင်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း ကျေးရွာမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု ပထမဆုံး စတင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 7:32 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ကျောက်မီးသွေးသယ်မည့် ဖြတ်လမ်းကိစ္စ SSA အခွင့်ရယူရန်လို
တနင်္လာနေ့၊ 03 သြဂုတ်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မုံးကုတ်ဒေသထွက် ကျောက်မီးသွေးတူးရန် နှစ် ၄၀ ကန်ထရိုက်ရထားသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဆရပူရီ ကုမ္ပဏီ အား ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကျောက်မီးသွေးသယ်မည့်ဖြတ်လမ်းအသစ်ဖေါက်လုပ်လျှင် သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ထံ ခွင့်ရယူ ရမည်ဟု SSA ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီးယွက်စစ်ပြောက ပြောသည်။
“ကျောက်မီးသွေးသယ်ယူဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖေါက်လုပ်မယ့်လမ်းပိုင်းက ကျနော်ဘာမှ မပြောလိုဘူး။ သျှမ်းပြည် အတွင်းပိုင်းမှာ ဖေါက်လုပ်မယ့်ကိစ္စကတော့ ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေကို ဖြတ်ကျော်ဖေါက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ ကျနော် တို့ နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု၊ သဘောတူညီမှုမရှိဘဲနဲ့ ဖေါက်လုပ်သွားခွင့်မရှိဘူး”- ဟု ဗိုလ်မှူးကြီးယွက်စစ်က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ယခုလ ၁ ရက်နေ့က ပြောပြ၏။
သံလွင်အရှေ့ခြမ်း မိုင်းဆတ်မြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၃၀ ကျော်အကွာ မုံးကုတ် (ခေါ်) မိုင်းခုတ်ထွက် ကျောက်မီး သွေးများ တူးယူ ခွင့်တင်ဒါကို စစ်အစိုးရက ထိုင်းနိုင်ငံ ဆရဘူရီ ကျောက်မီးသွေး ကုမ္ပဏီ (Saraburi Coal Mining) အား နှစ် ၄၀ စာချုပ်ဖြင့် ၂၀၀၈ နှောင်းပိုင်းက ပေးပြီးနောက် ကျောက်မီးသွေးများအား ထိုင်းသို့ သယ်ဆောင်ရာတွင် မိုင်းဆတ်၊ မုံးကုတ်၊ မိုင်းလုံ၊ တာချီလိတ် - မယ်ဆိုင် လမ်းကိုအသုံးမြုပလိုဘဲဖြတ်လမ်းဖြင့် တောင်ဘက်စူးစူး မုံးကုတ် - မိုင်းတွမ်း - ယောင်ခါ - မယ်ကျုတ် မှတဆင့် ထိုင်းနယ် စပ်ကိုဖြတ်၍ မုံ့ကောဝ်လန် - ဟင်တက် မှ ချင်းရိုင်းသို့ တိုက်ရိုက် သယ်ဆောင်လိုသည်ဟု ဆို၏။
“ကျောက်မီးသွေးသယ်ဖို့ကိစ္စက ကျနော်အပါအ၀င် အများပြည်သူက သဘောမတူဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဆရပူရီကုမ္ပဏီက လမ်းဖေါက်ရေးအတွက် လူထုဆန္ဒကောက်ယူတဲ့စစ်တမ်းကို ပြီးခဲ့တဲ့လက ကွင်းဆင်း လုပ်ခဲ့တယ်။ စစ်တမ်းအရ ကန့် ကွက် တဲ့သူများတယ်။ ဒါတောင်သူတို့ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ဘက်ကစုရုံးဆန္ဒ ပြဖို့ဘဲ ရှိတော့တယ်” - ဟု အမည်မဖေါ်လိုသည့် ဟင်တက်မှ ကျေးရွာသူကြီး တဦးကဆိုသည်။
ဖြတ်လမ်းမှတဆင့်သယ်ဆောင်လျှင် (၁) သဘာဝ သစ်တောပြုန်းတီးမှုအန္တရာယ်၊ (၂) လူကုန်ကူးမှုပြဿနာ၊ (၃) မူးယစ် မှောင် ခိုပြဿနာ၊ (၄) သျှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းလှုပ်ရှားနယ်ဖြစ်သောကြောင့် နယ်စပ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြဿနာ များကြံ တွေ့လာနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း - ၎င်းင်းကပြောပြသည်။
မုံးကုတ်ကျောက်မီးသွေးတွင်းမှတဆင့် ကျောက်မီးသွေးဆိုင်ရာအသုံးဝင်သတ္တုများအားလုံး တရက်လျှင် အနည်းဆုံး တန်ချိန် ၅၀၀၀ထိုင်းသို့တင်ဆောင်နိုင်မည်ဟုအဆိုပါကုမ္ပဏီမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကခန့် မှန်းထားကြသည်။ အလား တူပင် သျှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ်တွင် လွန်ခဲ့သည့် ၆ - ၇ နှစ်ကကျောက်မီးသွေးတွေ့ရှိ ထား သောကြောင့် တူးဖေါ်ရန် နအဖ စစ်အစိုးက ဒေသခံများ၏လယ်/ယာ/ခြံမြေအများအပြားသိမ်းယူထားကြောင်း သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း သတင်း ရပ်ကွက် ကဆိုသည်။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 6:44 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
သျှမ်း - ကချင်နယ်စပ် စစ်အစိုးရတပ် အင်အားတိုးမြင့် KIA ကိုတိုက်ဘွယ်ရှိ
ကြာသပတေးနေ့၊ 06 သြဂုတ်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
နအဖ စစ်အစိုးရတပ်များလှုပ်ရှားသွားလာမှု အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေသည့် ထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တော်လှန် ရေးအဖွဲ့အစည်းအချို့က သျှမ်း - ကချင် နယ်စပ်တလျှောက် စစ်အစိုးရအင်အားတိုးမြှင့်မှုသည် KIA ကို ဦးစွာထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း ယခုလဆန်းပိုင်း၌ သုံးသပ်ပြော ဆိုနေကြသည်ဟုဆိုသည်။
“သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအခြေစိုက် စစ်အစိုးရတပ်တွေ မိုးမိတ်ဘက်ဖြတ်ပြီး ကချင်နယ်ခြားဘက် အင်အားတွေပို့လွှတ် ဖြည့် တင်းနေတယ်၊ အခုလ (၂) ရက်နေ့ လားရှိုးမှာ ရမခတိုင်းမှူး အောင်သန်းထွဋ်အစည်း အဝေးခေါ်တယ်၊ အဲဒီ နောက်ပိုင်း ၀ နဲ့ အပစ်ရပ် SSAမြောက်ပိုင်းထိန်းချုပ်နယ် မြေအကြား ကူးလူးဆက်ဆံမှုခက်ခဲအောင် ထိုးဖေါက်အင်အားဖြည့်နေရာယူလာ သလို တပ်တွေတော်တော်များများ မြောက်ဘက်ကို တက်သွားကြတယ်”- ဟု လားရှိုး ကုန်သည်တဦးက ဆိုသည်။
[ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA (photo: flickr.com)]
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ု၍ဗ နယ်ခြားဘက်တွင်လည်း ရှိရင်းစွဲစစ်အစိုးရအခြေချတပ်များအပြင် အခြားဒေသ မှ စစ်ကူအင်အားများလည်း မထင်မရှားဝင်ရောက်ဖြည့်တင်းနေကြောင်း၊ KIO/KIA ဌာနချုပ် လိုင်ဇာ နှင့် မလှမ်း မကမ်းတွင် လက်နက်ကြီး ၁၅၅ အမ်အမ် ဟောင်ဝစ်ဇာ (Howitzer) တောင်ပစ်အမြောက်အချို့လည်းချထားကြောင်း ပြောဆိုနေကြသည်။
“ကချင်လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသက ၀ ၊ ကိုးကန့်၊ မိုင်းလား တို့နဲ့နယ်မြေချင်းမထိစပ်ဘူး၊ သီးခြားဖြစ်နေ တဲ့အတွက် စစ်အစိုးရက ၀ တပ်မတော် UWSA မတိုက်ခင် ကချင် KIA အဖွဲ့ကို ဖြတ်လေးဖြတ်နဲ့ အရင်ရှင်းပစ်ဖို့အလား အလာများတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၀ ပြီးရင် ကချင်တပ်ကအင်အားအတောင့်ဆုံး”- ဟု အပစ်ရပ်အဖွဲ့ များအားစောင့်ကြည့် လေ့လာသည့် ပြည်တွင်း သျှမ်းအသိုင်းအ၀ိုင်းက ဆိုသည်။
၀ ပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော်ထိန်းချုပ်နယ်မြေ၏ မြောက်ဘက်တွင် - ကိုးကန့်၊ တောင်ဘက်တွင် မိုင်းလား၊ အရှေ့ ဘက်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ဘက်တွင် သံလွင်မြစ်နှင့် အပစ်ရပ်သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA မြောက်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့များဝန်းရံ အကာအကွယ်ြုပနေသလိုဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဗမာစစ်တပ်က ၀ တပ်မတော်ကို တိုက်ခိုက်မည် ဆိုပါက သျှမ်းပြည်တပ်တော် SSA-N တပ်ဖွဲ့နှင့် ဦးစွာတိုက်ခိုက်ရမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်းဆို၏။
NDA-K ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော် - ကချင် မှာမူ UWSA ၀ တပ်ဖွဲ့၊ MNDAA ကိုးကန့်၊ NDAA-ESS မိုင်းလား တပ်ဖွဲ့တို့နှင့် PDF စစ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ထားသော်လည်း နယ်မြေထိစပ်မှုမရှိခြင်း၊ ကချင်အမျိုးသားချင်းဖြစ်သည့် KIO/ KIA နှင့်လည်း ပဋိပက္ခရှိခြင်းတို့ကြောင့်၊ စစ်အစိုးရ အင်အားသုံးတိုက်ခိုက်လာလျှင် ကချင်အဖွဲ့ပထမဆုံး ရင်ဆိုင်နိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း - ပြောဆိုနေကြသည်။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 6:40 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ကျေးလက်တောရွာမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးနောက် စစ်အစိုးရတပ် မုဒိမ်းကျင့်မှု ထပ်မံကျူးလွန်
သောကြာနေ့၊ 07 သြဂုတ်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
စစ်အစိုးရတပ်များ သျှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်းကျေးရွာ ၁၀ ကျော် (အိမ်ခြေ ၃၀၀ ကျော်) မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးနောက်ပိုင်း ဒေသခံ တောင်သူအမျိုးသမီးတဦးအား အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြောင်း သျှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်း သတင်းရပ်ကွက်ကဆိုသည်။
သြဂတ်စ် ၂ ရက်နေ့က မိုင်းကိုင်မြ့နယ် ဟမ်းငိုင်းအခြေစိုက် ခမယ ၅၁၄ မှ ဒုဗိုလ်မြင့်သန်း ဦးဆောင်သည့် အင်အား ၂၅ ယောက်နှင့်အတူ လမ်းပြအဖြစ် SSA ခွဲထွက် ဗိုလ်မိုင်းဇင့် (လက်နက်ချ) အဖွဲ့မှ စိုင်းရွေးဦးဆောင်သည့် အင်အား ၁၄ ယောက် (စုစုပေါင်း အင်အား ၃၉ ယောက်) တို့ လဲချားမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် တတ်မောက် ကျေးရွာအုပ်စု နောင်ပုတ် ရွာ၌ ၀င်ရောက်တည်းခိုစဉ် တပ်ကြပ်ကြီးတင်အေးနှင့် တပည့် ၄ ယောက် ရွာမှ မိုင်ဝက်ခန့်ဝေးသည့် ယာခင်းဘက် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်ရှာထွက်ရာ ယာခင်းပေါင်းမြက်ရှင်းနေသည့် စိုင်းသြဒ (နာမည်အရင်းမဟုတ်) အသက် ၂၃ နှစ်၊ ဇနီး နန်းနွံ (နာမည် အရင်းမဟုတ်) အသက် ၂၀ တို့နှစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံ၍ လင်ဖြစ်သူ စိုင်းသြဒအား သျှမ်းသူပုန်ဟုစွပ်စွဲပြီး ကြိးနှင့်တုပ်ကာ ဇနီးသည်အား ၎င်း၏ ရှေ့မှောက်တွင် အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သည်ဟုဆို၏။
အကြောင်းစုံသိသည့် အမည်မဖေါ်လိုသူ ပင်လုံရောက်လူငယ်တဦးက -“ကျနော်တို့ဘက်က ရွာတွေကို အခုလ ၅ ရက် နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး မြို့ဘက်ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတယ်။ အထက် အမိန့်လား၊ ရွာသူ/သားတွေကို သက်သက် အာဏာပြ အနိုင်ကျင့်တာလားတော့မသိဘူး။ ရွာမပြောင်းရင် မီးရှို့ပစ်မယ်၊ ဘာညာ ခြိမ်းခြောက်တယ်၊ ရွာသားတွေ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ် သောကရောက်နေချိန်မှာ ကျနော့် သူငယ်ချင်းရဲ့ဇနီးကို စစ်သားတွေ မုဒိမ်းထပ်ကျင့်တာဘဲ” - ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်အား ပြောပြ၏။
စိုင်းသြဒအား သျှမ်းသူပုန်ဟုဆိုကာ ယာတဲတိုင်၌ ကြိုးတုပ်ပြီး မေ့မျောလုနီးပါး ရိုက်နှက်ပြီးဇနီးဖြစ်သူ နန်းနွံ ကိုလည်း လင်ဖြစ်သူ၏ ရှေ့မှောက်ပင် ညနေ ၅ နာရီမှ မိုးချုပ်သည်အထိ အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြောင်း ပြောပါသည်။
“တချို့ကျေးရွာတွေ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာလဲတွေ့နေတော့ ကြောက်နေကြတယ်၊ အဲဒီအတောအတွင်းမှာဘဲ ရွာတွေကို မြို့အနီးအနားပြောင်းဖို့ အမိန့်ထုတ်ထားတာရှိတော့ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ကိစ္စ အထက်ကိုသွားတိုင်တန်းဖို့ မရဲကြဘူးလေ၊ ရွာသူကြီးကိုလဲ သျှမ်းသူပုန်တွေကို ထောက်ပံ့တယ်လို့ ဗမာ စစ်တပ်ကစွပ်စွဲ ကြိမ်းမောင်းထားတော့ တရားဥပဒေနဲ့ ပြစ်ဒဏ် စီရင်ဖို့ ဘယ်မှာရှိတော့မတုန်း” - ဟု ဆို၏။
တတ်မောက် ကျေးရွာအုပ်စုသည် လဲချား - မိုင်းကိုင် (တောင်ကြီး - လွိုင်လင် - ပင်လုံ - လဲချား - မိုင်းကိုင် - လားရှိုး) ကားလမ်း၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်း၊ လဲချားမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် တွင်ရှိသည်။ တတ်မောက်ရွာနှင့်ထိုဒေသတ၀ိုက် ကျေးရွာ များကို သျှမ်းသူပုန်နှင့် ဆက်သွယ် သတင်းပေးပို့သည်ဟု ဆိုကာ အစိုးရစစ်တပ်က ကျေးရွာ ၁၀ ကျော်အား ဂျူလိုင်လ ၂၇ မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 6:31 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
The Shan who call themselves the Tai are found primarily the
Shan State of Burma. The Burmese word "Shan" (referring to the Tai) is
variously spelled Syam, Syaam, and Syan in the inscriptions of the
Pagan period (1044-1334) and in old Burmese texts. In modern Burma the
Tai people are called Shan, as are various other branches of the Tai
people of Shan state in Burma.
The Shan areabranch of the Tai race. Historical accounts maintain
that Upper Burma was the place of the Pyu and the Shan before the
establishment of the Pagan kingdom by Anawratha (1044-1077). In Yunnan
the Mao kingdom of the Shan existed until it was subdued by the Ming
court. From that base they often sent forays into Upper Burma and
Assam. Later they had Shan colonies in some parts of southern and
northern Shan state, Kachin state, and Sagaing Division in Upper
Burma, and all these colonies were under the suzerainty ofaMao
chief. Eventually the Shans also controlled almost all Upper Burma.
This Shan period of Burmese history lasted from about 1300 until 1540.
The Shan of Yunnan, however, were subdued by the Chinese after three
successive wars (1441-1448). The final destruction of Shan power in
Yunnan occurred in 1604 when the Chinese troops swooped down on
Mongmao. After the collapse of the Mao kingdom in Yunnan, the power of
the Shan in Burma also weakened and the group finally disintegrated
into many small Shan principalities. The development of the Shan in
Burma depended much upon the political history of Burma which
eventually divided the Shan into such groups as:
a. the Khamti Shan (the Tai in the Khamti region of Sagaing division
in Upper Burma)
b. the Mao Shan (the Tai in the Mao River valley in northern Shan state)
c. the Tai Leng (the Red Tai in Kachin state)
d. the Gum Shan (the Tai Hkun in the Kengtung district of eastern Shan state)
The Shan (Tai) are spread throughout Burma, in Shan state, Kachin
state, and Sagaing division. The states and divisions in Burma were
fixed during the British administration period (1885-1948). In the
time of the Burmese kings, the Shan (Tai) areas were named "Saint
Taing," "Kambawza Taing," "Haripunza Taing," "Khemawara Taing," etc.
In the British administration period (1885-1948), Burma was
reorganized into states, divisions, and hill tracts. The present Shan
state was formed during the British period, becoming the "Federated
Shan States" in 1922. The rest of the Shan areas in Burma were put
into Sagaing division, Myitkyina, Bhamo, and Putao districts. The
geographical barriers, difficulties in communication, and the system
of administration since the times of the Burmese kings separated the
Shan from each other, resulting in each group developing its own way
of culture and tradition. Thus, those Shan who settled in the Khamti
region are called Khamti Shan, those in the Mao River valley are Mao
Shan, and those in eastern Shan state are the Hkuns.
A Brief History of Tai(Shan)
Shan” comes from the Burmese rendering of “Siam” or “Siem” the name
by which the ancient Khmer or Cambodians call the Tai or Thai People.
The Shan are members of the Tai Speaking Peoples who today live in
northeastern India, Burma & the Federated Shan States, Thailand, Laos,
Cambodia, Vietnam and south & southwestern China. In 1957, Premier
Chou-en-lai said that there are over 100 million Tai or Dai Speaking
Peoples in the People’s Republic of China.
Historically Shan or Tai Kingdoms & Principalities have stretched from
northeast India through Southeast Asia and into south & southwestern
China and the Shan today are linguistically and culturally closely
related to modern Thailand and Laos.
In the late 19th century the Shan Principalities on the Shan Plateau
were annexed by the British following their conquest of the Burmese
kingdom of Mandalay and British Burma then consisted of the Shan
States, “Burma Proper” and the Frontier Areas.
Administratively, the Shan States asaProtectorate ruled themselves &
had autonomy in internal affairs separate from “Burma Proper” which
was governed directly by the British Governor in Rangoon – and indeed
Banknotes of British Burma were inscribed in English, Shan & Burmese.
After the end of WWII the Shan Princes & Representatives in 1946
convened the First Panglong Conference in the Shan States attended
also by Leaders & Representatives of the British Burma Frontier Areas.
A second Conference was called in 1947 to which the Burmese came as
Observers and it was at this second Conference that General Aung San
of the Burmese tabledaproposal to include “Burma Proper” in forming
a Union. In the vote that followed, the Shan narrowly byamargin of
51:49%, voted for the Union of equal partnership and because of this
decision take by the Shan, the Chin, Kachin & Karenni also ratified
the Panglong Agreement which also specified the Right of Secession – a
Right that is also recognized in the 1948 Union of Burma Constitution,
Chapter X specifically stating the Shan State’s Right to Secede from
the Union of Burma after 10 years.
Following the second Burmese military coup in 1962, the Shan State has
lost all its autonomy and is now under Nazi-like occupation of the
Burmese SPDC regime. In 2000, 2004 & 2006, Shan Leaders secretly and
clandestinely held meetings and canvassed the people of the Se-Viengs
or Counties of the Shan lands resulting in 2000 & 2004 ina48:14
voting for independence and that majority rising to 54:8 or 87%
majority for independence in 2006.
On April 17, 2005 President Prince Hso-khan-pha of Yawnghwe, under
instructions from the Shan Leadership inside occupied Federated Shan
States (consisting of Shan, Palaung, Pa-O, Kokang States and other
ethnic communities), madeaDeclaration of Independence and the Shan
Government is now working to fulfill its Mandate for Independence and
to deliver humanitarian relief to the victims of Burmese SPDC
atrocities and war crimes.
The Shan States is situated in the north-eastern part of Burma,
bordering the People's Republic of China on the North and East, the
Lao People's Democratic Republic on the East, the Kingdom of Thailand
on South and East, the Karenni state on the South and the Union of
Burma (Myanmar) on the west. It is positioned at Latitude North 19
degrees 20 minutes and South 24 degrees9minutes and between
Longitude East 96 degrees 13 minutes and West 101 degrees9minutes.
The Shan State isahigh plateau with an elevation of 5,000-6,000
feet above sea level. It is covered with dense evergreen forests,
pine, streams, rivers and waterfalls making the countryanatural and
beautiful land. It lies at an average of 3,000 to 4,000 feet above sea
level and the highest point is Mount Loilaeng (8,777 ft ) in Mong Yai,
Loi Parng Nao (8,408 ft ) in Kentung, Loi tzang (8,129 ft) in Mong
The Salween ( Nam Khong in Shan) River is the principal river of
the Shan State. It has its source in the Tibetan Himalayas and flows
southwards through China and enters the Shan State, dividing it into
two parts, then passes the Karenni state, Karen State and Mon State
finally joining the Indian Ocean at the Gulf of Martaban near the town
of Moulmein. Many tributaries of the Salween, such as the Nam Taeng,
Nam Parng and Nam Nim all enter the Salween near the Town of Kun Hing
(Kun Haeng: thousand islets) where many islets by the hundreds are
formed. In the east there are the Nam Ma, Nam Kha and Nam Sim which
flow into the Salween. The Mekong ( Nam Khawng in Shan) serves as the
boundary between Laos and the Shan State foralength of 120 miles,
then flows through Thailand, Cambodia and Vietnam into the Gulf of
Nam Loei and Nam Kok, which flows through Kengtung, all join the
Mekong. Nam Mao (Shweli in Burnese) and the Nam Tu in the north flow
into the Irrawaddy. The Nam Zawgyi, Nam Tamphat and Nam Bilu in the
south are all famous by their capacities as natural waterways. Because
these rivers flow through deep valleys of mountain ranges, many rapids
and waterfalls can be found throughout the Shan State. Joung-ang, the
biggest waterfall on the Nam Taeng can be found near the town of Keng
Tawng in Mong Nai Twnship.
The second largest one is Om-pu on the Nam Parng River in the Shan
State of Monghsu. Among Shan State's numerous waterfalls, the only one
so far used for hydroelectric power is the Marnsarm Falls on the Nam
Yao River in Hsipaw Twnship. Marnsarm Falls generates enough power for
the surrounding towns and the Bawdwin Mines at Panghai, Namtu
Township. Waterfalls large and small can be found on most of the
The inland lake of Inlay (Nong Hai Ya in Shan)14 miles long and 7
miles wide, is noted for the floating villages and floating vegetable
gardens, silk-weaving and fantastic leg-rowers. Hot and cold
underground springs are countless and some have been developed as rest
and recreation places. Primitive hard rocks that contain numerous
kinds of mineral ores waiting for discovery and development form the
Shan Plateau and its southern continuation into the Tenasserim.
Capital: Taunggyi (Tonti in Shan)
The Shan symbol isatiger. The Shan flag consists of yellow,
green and red stripes withawhite circle in the middle. Yellow stands
for Buddhism and that the Shan are origin of the yellow race(The
Mongoloid peoples). Green symbolizes the verdant landscape,awarm
climate and farming. Red symbolizes the Shan's courage. The white disk
is for the moon, the Shan’s pure and peaceful spirit. It is forbidden
to use this flag in Burma and Thailand.
Area: 62,500 square mile (160,000 square kilometers)
Population: About 7-8 million (est.)
The Shan plateau located in the northeastern part of Burma is
generally cooler than the rest of Burma and Thailand, since it is
mountainous and higher in elevation. There isacool, dry season from
November to February, andahot season or summer from February to May,
a hot,rainy season from June to October.
One town can reach over 100F while justafew hours drive away 77F
is normal. Coldness in winter brings the temperature down to 40F in
hill-station towns and 60F on the plains. Annual rainfall averages
between 40-60 inches. Flash flood of rivers and streams occur during
the rainy season causing landslides and floods in the lowlands.
In the areas where the elevation is over 4,000 feet, pine and
evergreen forest can be found in abundance; teak and woods of ‘Shorea
Robusta’ and ‘diptercarpus grandiflora’ abound in the hot lowlands.
Valuable woods such as teak, padauk or pterocarpus, sandalwood and
ironwood cover over 42,210 square miles. Mong Mit, Hsipaw, Mong Kung,
Tong Lao, Mawk-mai, Lawk-sawk, Mong-nai, Keng-tawng, Keng-kham,
Pa-lai, Mong-ton, Mong-sat are all hardwood and teak producing areas.
All kinds of vegetables and fruits are grown according to each
region’s soil and climatic conditions. Many forest products such as
lac, cutch, honey, beewax and wild orchids can be found.
Shan State is rich in natural resources.The majority land surface
of the Shan State is covered with primitive hard rocks and mineral
ores such as silver, lead, gold, copper, iron, tin, wolfram, tungsten
and manganese, have been discovered. The Burmese government is
exploiting mineral developments.For example, Bawdwin-Namtu silver and
lead deposit in the north is one of the largest in the world. Local
Chinese traders discovered it in the 14th century. In 1909 the British
started to take over under the name of "Burma Corporation Limited."
After the Union of Burma was established, it was registered asajoint
venture with the Burmese government under the name "Burma Corporation
Limited 1951". In 1965 the Burmese government nationalized the whole
enterprise. The newly discovered silver, nickel and tungsten deposits
are found in the Naungkieo township area called Yadana Theingi Mine,
where produces silver and lead sent to Namtu to be refined.
The Bawsai Mines in the south produces lead and pyrites. In the
surrounding hills of the southern town of Kalaw, dolomite, pyrites,
Fluorides can be found in abundance. At Loi Ma, near another southern
town of Hpe-Khoung, lead deposits remain undeveloped. Besides these
known deposits the geological survey discovered in 1963, there also is
tin and wolfram deposits at Pangpek near the Shan State capital of
Taunggyi, estimated at over 63 million tons. Diamond is found in the
environs of Mong mit and gems in Namhkan Township.
Many undiscovered or unexplored natural resources in the Shan
State still remain hidden to be used later for the development of the
Shan State and its people. Mogok (Mong Kut in Shan) which is world
famous for its rubies and sapphires lies within the State of Mong Mit
in the north but has been nationalized and drawn into the Mandalay
Division of Burma.
Ethnic groups: It is composed of more than 20 ethnic national groups
in Shan state. the majority of whom are Shan (Tai). It is a
multiethnic nation and the main ethnic groups are: Shan (Tai),
Palawng, Pa-O, Kachin, Wa, Lahu, Akha and Kokang Chinese.
Shan or Tai (Thai Yai in Thai): 68% of the total population are Shan
and therefore Shan are the dominant ethnic group. Most Shan are
farmers and livestock breeders who predominantly live in the valleys
Palawng or Ta-arng: About 7% of the total population are the Palaungs
who call themselves “Ta-arng”. They are concentrated in the northern
mountainous region of Namhsan or Palaung Tawngpeng State. They are
mostly dependent upon tea plantations producing English tea and
pickled tea (Chinese tea) for consumers throughout the Union. Due to
socio-political upheavals, some of them migrated into the central and
southern mountains of the Shan State using their Knowledge about tea
planting for their livelihood.
Pa-o: The Pa-o ethnic group is also about 7% and are found in the
Southern part of the Shan State. The Pa-o grow agricultural cash crops
such as potatoes, cabbages, garlic and especially the cheroot-leaves
for local and Burmese cheroot industries.
Wa: About 5% of the population are the Wa people. They inhabit the
eastern mountains along the Salween and the areas bordering China. The
Wa make their living on the harsh mountain slopes and valleys using
the old slash and burn methods.
Kachins: They are found in the northern region where the Shan State
borders with the Kachin State. The Kachin breed livestock and grow
vegetables, corn and rice in remote mountainous villages.
Dhanu: These people are settled in the lowlands on the western slopes
of the Shan Plateau bordering with Burma. The Dhanu work on their
paddy fields and vegetable farms.
Intha-s: These people live on the Floating villages and vegetable
plots in the largest inland lake called Inlay where silk weaving and
local handicrafts have been their home industry for generations.
Lahu: They are found east of the Salween along the mountainous border
region between the Shan State and Thailand.
Akha: Akha mostly live in the border areas between the Shan State and Laos.
Kokangnese: Kokangnese are found in the Northeastern Shan State close
to the Yunnan Province. They farm, breed livestock and conduct cross
border trading with China.
Padaung or Kayan: Padaung settled in the south around Mong Pai
Township where farming is their livelihood. Their womenfolk are known
as ‘giraffenecks’ because of the brass or silver rings worn round
their necks as adornments.
Lisu or Lisaw: Lisu are scattered in the north and southern Shan State
remote mountainous regions on large and permanent settlements, because
of their accustomed slash and burn farming traditions.
Yang-lam: Yang-lam are found around Ming-su and Kesi-wansam in the
central region living on primitive farming.
Liju: Liju are found around Kokang State in the north. They rely on
livestock raising and hill-farming.
Chinese and Indian immigrants are found throughout the country and are
mostly traders, shopkeepers and money-lenders. Some also live on
farming and livestock breeding too.
Burmese or Burmans: Burmese are scattered throughout Shan State as
government employees in offices, schools and administrative centers.
They also came in to find work as manual laborers and hired hands
doing various jobs in towns and in the countryside. Many ethnic groups
such as the En, Dhanor, Palay, and others can be found making their
living on primitive farms with contentment. All the different national
groups have lived harmoniosly together for thousand of years sharing
hardships and prosperity in times of peace and war.
The Buddhist religion, spread into the Shan society nine years
after the Lord Buddha attained His enlightenment (Mong Mao Chronicle)
and came to Loi Seng monastery to teach Buddhism among the Shans
(Dai/Tai) people. The Loi Seng monastery is still at the same place
situated near the Mong Mao district town known to the Chinese as Ruili
today. Naturally, Buddhist religion emphasizes respect to the elderly.
It becameatradition of the Shans since then. Religious learning,
self-training through meditation, reflection on one's deeds and the
study and the assessment of the Law of Nature as Buddhism teaches made
them acquire wisdom. The younger generation's respect for the elders'
wisdom also becameatradition.
The Shan believe in spirits, which can cause good or evil in a
person’s life and must be appeased. They also believe in reincarnation
and that the good or evil done in one’s life will determine their
status and fate in the next life. In order to atone for wrongs done, a
person must participate in merit-building activities, such as
sufferingapunishment of some sort or doing good deeds such as giving
to and worshipping the monks. The lowest form of life is to be an
animal such asadog oracat, and the highest is to retire into a
state of passionless peace.
All Shan boys about 12 years old enter the novicehood forashort
period of time. Some become monks again later foralonger period of
time( about 20 years old to enter the monkshood). They believe that
the way to happiness it to renounce the world and carnal desires. They
also believe that the physical and the spiritual are closely
Languages: The Shan language is part of the Tai languages group of the
Tai-Kadai language family, and is related to Thai and Lao. The spoken
language are Shan, English and Burmese. Minority ethnic groups have
their own languages. Tai with dialects varying for each group.
literature: The Shan have their own alphabet related to ancient
Sanskrit. Shan, like Thai, is built on5different tones(Chinese Shan
have 6). The Shan Phonology Committee including the representatives of
the Tai long,Tai Mao, Tai Khamti, and Tai Hkun devisedaCommon Shan
Script in 1974. For precision in writing the various Shan languages,
the committee decided to have six tone marks in the Common Shan
The Shan havearich cultural heritage and areaproud and
sophisticated race. They areagentle and peaceful people. Many of
their customs are related to the Chinese and the Thai. They have their
own centuries old literature, art, agriculture and history. Tattooing
is common among Shan men. The tattoos are often Buddhist connotations
or signs, placed there in an effort to ward off evil spirits and
protect the person from danger. Tattooing is also consideredasign of
manhood in Shan society.
Instead of shaking hands, the Shan usually greet witha"wai", or
placing the palms together in front of the face or chest and say “ Mai
Soong Kha ”. The one lowest in status should initiate the greeting.
How high the palms are placed reflects the status of the person being
greeted in relation to the person greeting. In addressing each other,
the Shan use titles (such as "Pa: grandmother", "Loong: uncle", “Pi:
elder”, "Nawng ying: little sister", etc.) to express the person’s
status or relationship to others. It is not acceptable to show
affection between the sexes in public.The Shan are traditionally
wet-rice cultivators, shopkeepers, and artisans. Most Shan are
Theravada Buddhists and/or observe their traditional religion, which
is related to animist practices.
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 6:14 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest